Eyona Bhothi yoMculo yeDiscord - VidaBytes | LifeBytes
Iris Gamen | 11/06/2022 20:00 | Iinkqubo
Ukuba untywiliselwe kwihlabathi leDiscord, kwaye uziva ngathi amagumbi ayo okuxoxa anesithukuthezi, esi sithuba siya kuba nomdla kuwe ukusukela. Siza kuthetha ngezona zixhobo zomculo zibalaseleyo zeDiscord. Bonke abasebenzisi bale seva bafuna ukunika ijelo labo inkangeleko eyahlukileyo, kwaye ngumbandela nje wokwazi ukuba zeziphi ezona zixhobo zilungileyo kulo.
Eli qonga, ikunika ithuba lokuba ukwazi ukwenza indawo ngokuthanda kwakho, ukongeza izinto ezahlukeneyo ezenza kube buqu ngakumbi. Unokwenza amajelo, iiseva kwaye uphuhlise i-bots yakho ngokokuthanda kwakho.
I-Discord, iye yaba lelinye lawona maqonga emiyalezo abalulekileyo kwi-intanethi. Kukho iintlobo ngeentlobo zeebhothi zokongeza kweli qonga, ezinokusuka kwezo zijolise ekumodareyitheni iingxoxo, ukuya kwabo bamsebenzi wabo uphambili kukonwabisa, njengebhoti yomculo. Asikuzisi nje ingqokelela yowona mculo ubalaseleyo, kodwa kwabo bangayaziyo iDiscord siza kuthetha ngayo.
1 Ukungavisisani; yintoni na kwaye yintoni imisebenzi enayo
2 Ziziphi iibhothi kwiDiscord?
3 Eyona Bhothi yoMculo yeDiscord
Ukungavisisani; yintoni na kwaye yintoni imisebenzi enayo
Ngokuqinisekileyo ukuba unxulumene nehlabathi lomdlali, uya kulazi eli qonga ngokugqibeleleyo. Kuba, inomsebenzi wokulungelelanisa, ukudibana nabantu abatsha kunye nokunxibelelana nabahlobo bakho. Imalunga ne i-app yengxoxo efana namanye amaqonga anomsebenzi ofanayo.
Ngokomgaqo, ijolise kubasebenzisi ngaphakathi kwihlabathi lemidlalo, apho banokudibana khona, balungelelanise indlela yabo yokudlala kunye nokuthetha ngelixa bedlala umdlalo. Ayisetyenziswa kuphela ngabadlali bemidlalo, kodwa nakwezinye iinkampani ezinabasebenzi abaninzi.
Ukukwazi ukunxibelelana ngesi sicelo yinkqubo elula kakhulu, ukongeza ekunikeni imisebenzi eyahlukeneyo yokukhangela ukufumana umntu othile kwaye ke ukwazi ukubongeza kuluhlu lwakho loqhagamshelwano. eli qonga Inokuchazwa ngamagama amabini, umbutho kunye nonxibelelwano.
Njengoko sele sitshilo, uninzi lweeseva kweli qonga zinxulumene nehlabathi lemidlalo yevidiyo, kodwa kwakhona ungafumana abancedisi abahlukeneyo apho ezinye izihloko zixoxwa njenge-anime, ezoqoqosho, impilo yengqondo, okanye ukudibana nabantu abatsha kunye nokwenza abahlobo abatsha.
Ingxabano, ibalasele kwabanye ngenxa yokhetho olubanzi lweenketho zokuncokola. Kwakhona, ayiwuthothisi umdlalo ngelixa ukwi-intanethi uthetha nabahlobo bakho okanye abantu osebenza nabo. Ndiyabulela ekudalweni kweendima ngaphakathi komncedisi, unokulawula kwaye ulinganise okwenzekayo kumncedisi ukuba umdali oyintloko akakho.
Ziziphi iibhothi kwiDiscord?
Iibhothi kwiDiscord, ziinkqubo ezimsebenzi wayo ikukwenza umsebenzi ngokuzenzekelayo. Le misebenzi inokususela ekudlaleni umculo ukuya kwintsebenziswano elula phakathi kwabasebenzisi beseva.
Ngokuxhomekeke kwinto ofuna ukuyiphumeza, kufuneka ufake ibhot ethile. Ezi nkqubo zincinci baya kukunceda ukuba uzikhulule kuloo misebenzi idinisayo. Kufuneka ziqwalaselwe ukwenzela ukuba ngexesha lokusebenza kwazo zihambe ngokuchanekileyo.
Ukusuka apha, sikucebisa ukuba musa ukongeza iibhothi ngaphandle kokulawula, kungcono ukuba uthathe ixesha lokufumana eyona ifanele iimfuno zakho. Ngokwenza esi sigqibo, uya kuphepha iingxaki kunye nokudideka okunokwenzeka phakathi kwabasebenzisi.
Olu hlobo lwebhot lubalulekile kuyo nayiphi na iseva yeDiscord. Nabo, uya kukwazi ukudlala umculo oza kuviwa ngawo onke amalungu omncedisi, ivula kuphela imiyalelo ethile.
Ngenani elikhulu le-bots kwiimarike kule njongo, akulula ukufumana ukuba yeyiphi eya kunika iziphumo ezilungileyo. Ngoko ke, kule post sinikezela ngesikhokelo esineenkcukacha kwezinye zezona zibalaseleyo.
Enye ye eyona bots igcweleyo neyaziwayo yokudlala umculo phakathi kwabasebenzisi beDiscord. Iya kukuvumela ukuba udlale umculo osuka kumaqonga ahlukeneyo anje ngeYouTube, Vimeo, SoundCould, njl.
Kwakhona ikunika ukukwazi ukwenza uluhlu lokudlala oluqhelekileyo. Yongeza, ehambelana namaqonga omculo wokusasaza afana neTwitch.
Enye ibhot yomculo enamandla kakhulu, enemisebenzi eyahlukeneyo. Ngokusebenzisa iqela lenjongo yolawulo uya kukwazi ukuqwalasela imisebenzi eyahlukeneyo okanye imiyalelo ofuna ukuyenza ngokusesikweni. Ukongeza, inemisebenzi yokukwazi ukumodareyitha, ukuthulisa okanye ukuvala okwethutyana abasebenzisi abaphula nawuphi na ummiselo.
Ibhot yomculo yasimahla yeDiscord. Ibandakanya imisebenzi efana kakhulu nezinye kwezi nkqubo ezincinci ezifana ukubanakho ukudlala iingoma kwamanye amaqonga njengeYouTube, Twitch, Mixer, Bandcamp kunye nenani elikhulu labasasazi.
Ngeempawu zayo zokudlala, ungatsiba uye kwingoma elandelayo, iluphu, hambisa, susa emgceni, njl. Kwakhona, Chip inokhetho lokukubonisa amagama eengoma ezikhethiweyo.
Eyona njongo iphambili yale bot yeDiscord kuku Sombulula yonke into enxulumene nokumodareyitha, ukuzonwabisa kunye nomculo. Enye yeengongoma zayo ezilungileyo kukuba ikwiSpanish, eya kwenza ukuphatha kwayo kunyamezeleke ngakumbi kubasebenzisi.
I-Ayana yi-bot, inokwenziwa ngokwezifiso ngokupheleleyo kwinto efunwa ngumsebenzisi ngamnye. Ngokusebenzisa i-automatisms, uya kukwazi ukumodareyitha umxholo womncedisi. Inomncedisi womculo ngemiyalelo kunye noluhlu lokudlala apho unokongeza iingoma zakho ozithandayo, ukukwazi ukusabela kwiingoma ezidlalwa ngabanye abasebenzisi.
Idume kakhulu kwabo bafuna i i-moderation bot, kodwa ukongeza, inokudlala nomculo. Hlalutya ngokuzenzekelayo iingxoxo kwiiseva ukunqanda ukuziphatha okuchasene nomthetho. Ngoluhlu lwemiyalelo, abasebenzisi abaziphatha kakubi banokuthuliswa okanye bagxothwe.
Iyahambelana namanye amaqonga omculo njengeYouTube, iTwitch okanye iSoundCloud. Yongeza, ukuba i-MEE6 ibandakanya umdlalo omnandi womculo onokuwonwabela kunye namaqabane akho eseva, apho kuya kufuneka uqikelele ingoma kunye nomculi odlalayo.
Okokugqibela, sikuphathele le nto intsha ibot yomculo eya kukuvumela ukuba umamele umculo ngabafowunelwa beseva yakho. Iyalungiseka, ikunika amandla okuseta iindima zomdlali, ukususa iingoma eziphindaphindayo, kwaye udale uluhlu lwabamnyama lwetshaneli.
Zonke ezi bots sizikhankanyile kwaye ezininzi ezininzi ziyafumaneka ukukhuphela kunye nokuzifaka kwiDiscord. Ngamnye wabo uya kukunika uthotho lwezixhobo ezahlukeneyo ukuba ungamodareyitha nje kuphela, kodwa uya kwenza iincoko zakho zibe yindawo eguqukayo neyonwabisayo.
Kuninzi okufumanayo malunga nesi sicelo sokuthumela imiyalezo, kodwa ngelixa kusenzeka oko, yenza iseva yakho ibe lihlabathi elahlukileyo ngokuyenza ngokwezifiso nge-bots zakho ozithandayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubomi beByte » Iinkqubo » Eyona Bhothi yoMculo yeDiscord